किन लगाइन्छ कछुवा आकारको औंठी ? यस्तो छ कारण | Samabesi Khabar
किन लगाइन्छ कछुवा आकारको औंठी?
कछुवा आकारको औंठी लगाउने व्यक्तिको माता लक्ष्मीसंगा सिधा लिंक हुन्छ
कछुवा आकारको औंठी धारण गर्नेसमयमा के ध्यान दिने ?
कछुवा आकारको औंठी धारणगर्दा कता फर्काउने ?
कछुवा आकारको औंठी लगाउनु अघि ध्यान दिनुस् :
कछुवा आकारको औंठी लगाउने विधी :
कुन कुन राशी भएकाले कछुवा आकारको औंठी लगाउन हुन्न ?